पप्पुलाई कहिलेसम्म थपिरहने जिम्मेवारी ?
विदेश बस्नेलाई असला माछा कोसेली
आफ्नै जिल्लामा उत्पादित विद्युत प्रयोग गर्न पाँदैनन् दार्चुलाबासी
भक्तपुरका कृषकलाई धान भित्र्याउने चटारो
घटना र विचार, न्युज डेस्क !5months ago May 14, 2018
नियमित ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज पनि १०.२८ अंकले घटेर एक हजार ३३८ बिन्दुमा झरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अंकले घटेको हो । वैशाख महिनाभर बजारमा १०० अंकको गिरावट भएको छ ।
‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत २।४१ बिन्दुले घटेर २८२।१८ बिन्दुमा पुगेको हो । आज कूल १६३ कम्पनीको १० लाख सात हजार ७६४ कित्ता शेयर रु ४२ करोड ५१ लाख ९४ हजार २९९ मूल्यमा खरीद बिक्री भएको छ ।
तीन उपसमूहको शेयरको मूल्य भने बढेको छ । त्यसमा उत्पादन २५.६१, अन्य ३.६३ र होटल समूह ८.६६ बिन्दुले बढेका छन् । यस्तै, बैंकिङ १०.०४, व्यापार २.६२, विकास बैंक २६.९१, जलविद्युत् १५.५, फाइनान्स ७।४३, बीमा ६९.९६ र माइक्रोफाइनान्स २२.५९ बिन्दुले ओरालो लागेको छ ।
पाँचसय नेपाली कलाकारसँग अमेरिकाको ‘ग्रिनकार्ड’
बेलायती सेनाका अधिकारी र प्रधानसेनापतिबीच भेटवार्ता
बस दुर्घटनामा सहचालकको मृत्यु, सुकुमायाले गरिन् आत्महत्या
नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको राजीनामा अस्वीकृत
दुःख-सुख र माया साटासाट गर्न हरिवंश सिड्नीमा